Google Maps Go: Misy ny kinova maivana amin'ny Google Maps | Androidsis
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, About us
Zavatra izay hitanay tamin'ity taona ity imbetsaka dia fampiharana malemy. Kinova maivana kokoa izay mandany angona firy. Nanatevin-daharana ny fironana i Google ary nanolotra ny Google Maps Go tamin'ity herinandro ity. Izy io dia kinova amin'ny fampiharana tsara ho an'ny finday tsy dia matanjaka loatra. Satria izy ireo dia afaka mankafy ny tombony lehibe amin'ny fampiharana lehibe.
Taorian'ny nanolorana azy andro vitsivitsy lasa izay, natao farany ho an'ny mpampiasa amin'ny Google Play. Na dia hatreto aza dia tsy ny firenena rehetra no afaka mankafy ilay fampiharana.
Google Maps Go dia mitady hamaha ny olana sedrain'ireo mpampiasa maro manana fitaovana ambany. Satria amin'ireo fitaovana ireo dia mety tsy mandeha tsara ny kinova mahazatra an'ny fampiharana, na amin'ny tranga sasany dia tsy mandeha mihitsy. Noho izany, amin'ity kinova ity dia tianay ireo mpampiasa ireo hankafy ny tombony rehetra ao aminy. Fa miaraka amin'ny kinova izay mila toerana kely kokoa ary mandany loharano vitsy.
Ho an'ny maro ny fanombohana ny Google Maps Go dia nahagaga be. Satria hitantsika ny fomba mihabe sy mihabe ny fampiharana voalohany rehefa mandeha ny fotoana. Ka ity fampiharana vaovao ity dia mandeha tsara amin'ny làlana mifanohitra amin'izany.
Amin'izany fomba izany, ireo mpampiasa manana a fitaovana ambany dia hankafy ny GPS. Hanan'izy ireo eo am-pelatanany ny fiasa fototra an'ny Google Maps. Ny interface dia mitoetra ho iray ihany, fa amin'ity tranga ity dia tsy misy ny fiasa rehetra. Ny tena lehibe sy fototra no voafantina.
Tsara ny fahitana an'izany Miahy an'ireo mpampiasa manana fitaovana ambany ihany koa i Google. Ka ny fahatongavan'i Google MapsGo vaovao tsara ho an'ny mpampiasa maro io. Satria afaka mankafy GPS mahomby amin'ny findainao ianao. Saingy raha tsy misy an'izany dia misy ny fandaniana habaka na enti-manana. Ahoana ny hevitrao momba an'ity kinova vaovao an'ny fampiharana malaza ity? Avelanay anao ny rohy fampidinana anao etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Maps Go: GPS faran'izay maivana sy kely indrindra amin'ny GPS
Fantatrao ve ny safidy azon'izy ireo?
Ity misy Padawan kely:
Asphalt 8: Ny Airborne dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo fiara Hot Wheels tany am-boalohany